UОльга ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Ifulethi elinamagumbi amabini kunye nekhitshi elahlukileyo. 3 ukusuka kwi-8 umgangatho, isakhiwo esitsha. Iyadi enomhlaba, i-intercom, iifestile ezijonge kwiiyadi ezolileyo. Ifulethi linayo yonke into yokwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo: ibhedi enkulu, ibhedi yesofa, i-ottoman, iTV, iWi-Fi, igumbi lokuhlambela elahlukileyo elinendlu yangasese, umatshini wokuhlamba, owomisa iinwele, ibhodi yoku-ayina, iitawuli, ilinen yokulala. . Ikhitshi ixhotyiswe nge-induction cooker, ifriji, i-oven microwave, izitya (kukho iti, ikofu, amanzi acocekileyo). NgoDisemba 31, 2019, indawo yokuhlala yalungiswa.
Ifulethi elinokulungiswa kwangoku (okugqitywe ngoJanuwari 2020) ekungeneni kweGrodno ukusuka eMinsk.
Umgangatho we-3 kwi-8, isakhiwo esitsha. Iyadi enomhlaba, i-intercom, ilifti, iifestile ezijonge kwintendelezo yabahambi ngeenyawo ezolileyo, zininzi iindawo zokupaka ezijikeleze indlu.
Ifulethi linayo yonke into yokwenza ukuhlala kwakho kukhululeke: ibhedi enkulu ephindwe kabini kwigumbi lokulala kunye ne-ottoman yomntwana ongaphantsi kweminyaka eyi-12, ibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala, iTV, iWi-Fi, igumbi lokuhlambela elahlukileyo elinendlu yangasese, a kumatshini wokuhlamba, ibhodi ukolulwa, isomisi, intsimbi, isomisi seenwele, gel uhlamba, ishampu, iitawuli, nelinen ebhedini.
Ikhitshi ixhotyiswe: i-induction cooker, ifriji, i-oven microwave, izitya zokupheka kunye nokuphakela, iti, ikofu, amanzi acocekileyo.
Umbindi wedolophu yimizuzu eyi-10 ngeenyawo okanye nge-1 km ngemoto, kufutshane ne-hypermarket ye-KORONA, iMarike ePhakathi, indawo yokuthenga ye-Galaktika, zombini izitishi ziyimizuzu emi-5 ngeenyawo, imizuzu emi-5 ngemoto (endleleni yendlela yokujikeleza) iziko lokuthenga le-TRINITY, kukulungele ukuya kwimarike yaseYuzhny.
Ukucoceka okugqibeleleyo, ukungena kwe-clock-clock-in, abahambi bezoshishino babonelelwa ngamaxwebhu ayimfuneko.
Indawo yokuhlala ikwisakhiwo esitsha, kwindawo ezolileyo ekungeneni kweGrodno ukusuka eMinsk. Iifestile zijonge kwiintendelezo zabahambi ngeenyawo. Kwimizuzu emi-5 yokuhamba zizikhululo zombini, imarike yesixeko, umgama wokuhamba ukuya kumbindi wedolophu oyimbali (10 min.)
Ngesicelo seendwendwe, ndiyakwazi ukunxibelelana nabo, ndibaxelele ngesixeko sethu, ndiqhube uhambo kwezona ndawo zinomdla kakhulu eGrodno.